Ogaden News Agency (ONA) – Deg Deg: Kulankii Baarlamaanka Soomaaliya oo Baaqday.
Deg Deg: Kulankii Baarlamaanka Soomaaliya oo Baaqday.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in dib loo dhigay kulankii ay maanta yeelan lahaayeen xildhibaannada Golaha Shacabka ee Jumhuuriyada Soomaaliya.
Warkan ayaa waxaa lagu faafiyay wakaaladda wararka ee Soomaaliya ee SONNA, taas oo sheegtay in kulanka maanta lagu baajiyay soo jeedin ka timid Madaxweynaha Soomaaliya. Maanta oo Sabti ah ayaa lagu waday in xildhibaannada Soomaaliya ay yeesheen kulan howleedkoodii caadiga ahaa.
Waxayse xildhibaannadu ku kala aragtiyo duwanaayeen ajandaha kulankaasi lagu faaqidi doono. Qeyb ayaa waxa ay ku doodaysaa in maanta laga doodi lahaa mooshinka ka dhanka ah Gudoomiyaha Golaha Shacabka, halka kuwa kalana ay leeyihiin mooshinkaasi waa uu jabay oo maanta waxaannu ka doodaynaa arrimaha xuduudda Soomaaliya iyo Kenya.
Arrintaan ayaa imaneysa kaddib markii dhawaan xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka ay sheegeen inay mooshin ka keeneen guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusman Jawaari. Ammaanka magaalada Muqdisho ayaa aad loo adkeeyay oo waxaa xidhan inta badan waddooyinka magaalada.